Oovimba abagqogqayo - Iphepha lesi-6 kwele-6
I-Ripple Pens Impendulo esemthethweni kwi-SEC engekho mthethweni yokuThengiswa kweXRP
Ukuhlaziywa: 10 Matshi 2021
I-Ripple ekugqibeleni ikhuphe i-retort esemthethweni kwizityholo ezinyuswe ngokuchasene nayo yi-US Securities and Exchange Commission (SEC) malunga nokuthengiswa ngokungekho mthethweni XRP.
Ngokutsho koxwebhu olusemthethweni lwango-Matshi 4 kwiNkundla yeSithili sase-United States yeSithili eseMazantsi eNew York, iRipple Labs izikhabe ngaw 'omane izityholo ezibekwe yi-SEC zokuba le nkampani yenze ukuthengisa ngokungekho semthethweni kwemali yayo yemveli, i-XRP, ukuya Abatyalomali abangalumkanga. Olu xwebhu luqaphele ukuba:
"U-Ripple uyala ukuba uyabandakanyeka nakuphi na ukubonelela ngezokhuseleko; uyala ukubonakaliswa okungachanekanga kwengcebiso yezomthetho iRipple efunyenwe malunga neXRP; kwaye uyayiphika into yokuba ibibambe 'umnikelo' omnye weXRP. ”
I-Ripple iqinisekisile ukuba i-XRP ayinakulingana nemigaqo yemigaqo yezokhuseleko ngokwesiko kwaye yaqaphela ukuba ukuthengiswa kwayo kwasekuqaleni kwemali ye-imali yedatha kwakungekho kuluhlu lwe-SEC "Umnikelo."
Inkampani esekwe eSan Francisco nayo ithi ukuba i-XRP ibiyinkuselo ngokwenene, inokuphazamisa ukusebenziseka kwayo njengesisombululo sentlawulo:
“Phambi kweli tyala, akukho mlawuli kwezokhuseleko kwihlabathi othe intengiselwano kwiXRP kufuneka ibhaliswe njengokhuseleko, kwaye kufanelekile. Ukusebenza kunye nokuthengiswa kweXRP akuhambelani kwaphela nolawulo lwezokhuseleko. Ukufuna ubhaliso lwe-XRP njengokhuseleko kukuphazamisa eyona nto isetyenziswayo… Ukunyanga i-XRP njengokhuseleko… kuya kubeka amawaka otshintshiselwano, abenzi beemarike, kunye nabanye abadlali kwimarike enkulu yemali, kwiimfuno zolawulo ezinde, ezinzima nezinexabiso ezingazange zicetyelwe lawula iimali ezikhoyo. ”
Amanqanaba aphambili eXRP aBonwayo-Matshi 10
I-Ripple (XRP) ikhule ngokuzinzileyo ukusukela ekuqaleni kuka-Matshi kodwa okwangoku inexesha elinzima lokophula ngaphezulu kwenqanaba lokunganyangeki kwengqondo. I-cryptocurrency kutshanje iwele ngezantsi komgaqo wethu onyukayo kwiiyure ezimbalwa ezidlulileyo kodwa zahlangatyezwa ngabathengi ngedip kwi-0.5000 yenkxaso, abathumele ixabiso ngaphezulu kwe- $ 0.4545.
Oko kwathethileyo, eyona cryptocurrency yesixhenxe ngobukhulu kufuneka inyukele emva ngaphezulu komkhondo wokuqhubeka nohambo lwayo ukuya kwinqanaba le- $ 0.5000 enqwenelekayo. Nangona kunjalo, ngenxa yokungabikho komthamo wokurhweba ngokujikeleze i-XRP, sinokubona ukuvela koluhlu lokudityaniswa kwe- $ 0.4600 kwiiyure nakwiintsuku ezizayo.
Okwangoku, amanqanaba ethu aphikisayo akwi- $ 0.4800, $ 0.5000, kunye ne- $ 0.5400. Ngelixa amanqanaba ethu enkxaso aphambili ayi- $ 0.4600, $ 0.4545, kunye ne- $ 0.4400.
Imali iyonke yentengiso: $ 1.69 zezigidi
Ukunyuswa kwemali yentengiso yeXRP: $ 21.2 billion
XRP ukubusa: 1.25%
tags Cryptocurrency, Ripples, XRP
I-SEC vs Ripple Saga: Ifayile yeGarlinghouse kunye neLarsen yokuGxothwa
Umphathi we-Ripple u-Brad Garlinghouse kunye nomsunguli-mbambano uChris Larsen babhenele kwiJaji u-Analisa Torres kwizindululo ezibini ezahlukileyo zokugxotha isikhalazo esihlaziyiweyo se-US SEC malunga neRipple Labs kunye nabaphathi bayo.
Amagqwetha amele uGarlinghouse kwileta ukuba isuti ye-SEC ngokuchasene neRipple yayiyi- "Ugqithiso olumiselweyo." Amagqwetha athi izityholo ze-SEC zokuba uGarlinghouse uncedisile kwaye wakhupha intengiso ye XRP yayineziphene kwiindawo ezininzi.
Ileta ifundeka ngolu hlobo: "I-SEC iyasilela ukuqaphela ubunyani boqoqosho lwentengiselwano yabamangalelwa kwiXRP, kwimakethi yeXRP, nakwishishini likaRipple, nganye kuzo ingabonisi mpawu zemveli zesivumelwano sokutyala imali phantsi kwe-SEC v. WJ Howey Co."
Uvavanyo lwe-Howey sisixhobo esisisiseko esisetyenziswa yi-SEC ukumisela ukuba ngaba i-asethi lukhuseleko okanye akunjalo. Ngokusekwe kolu vavanyo, i-SEC iqinisekisa ukuba i-XRP inazo zonke iimpawu zokhuseleko kuvavanyo lweHowey.
Nangona kunjalo, iiRipple Labs kunye nabaphathi bayo baqinisekisile ukuba iXRP yimali ebonakalayo, njengoko iqinisekisiwe liSebe lezoBulungisa kunye neFinCEN.
Intengiso yeXRP ebambe iGarlinghouse
Ukugcwaliswa kukwajongane nesikhalazo esenziwe kutshanje esenziwe yi-SEC phambi kwe Ukumanyelwa kwetyala ngoFebruwari 22, ebanga ukuba uGarlinghouse wayephikisana nemithetho yezokhuseleko xa wayethengisa ezinye ze-XRP ngeRipple.
UBrad Garlinghouse. Umthombo: Google
Umphathi we-CEO otyholwayo uthengise ngaphezulu kwe-60% ye-XRP yokubamba ixabisa malunga ne-160 yezigidi zeedola, inyathelo eliye lagxekwa kakhulu luluntu lwe-cryptocurrency.
Nangona kunjalo, amagqwetha kaGarlinghouse aqinisekisile ukuba ityala le-SEC ngokuchasene nomthengi wabo alinasihlahla kuba bekungekho bungqina bokuba ezo ntengiselwano zenzeka ne-US. Baqaphela ukuba "Inyaniso yeyokuba uninzi lwentengiso ye-XRP kaMnu Garlinghouse yenziwa kutshintshiselwano lwangaphandle, kwaye ezo ntengiselwano azenzi kwaye azinakuphula imithetho yezokhuseleko."
Okwangoku, amagqwetha amele uChris Larsen aqaphele kwileta yabo ukuba i-SEC ayiphumelelanga "Ukufaka ibango kuMnumzana Larsen." Oko kwathethileyo, bayabongoza ukuba ityala elichasene nomthengi wabo ligxothwe.
Kutshanje uGarlinghouse uxele ukuba imeko ye-SEC ibiyi "Ukuhlaselwa kwe-crypto ngokubanzi" kwaye loo Ripple "Ngekhe ivumele i-SEC ihlukumeze yonke le shishini [i-crypto]."
tags Cryptocurrency, Ripples, sec, XRP
Ukuhlaziywa: 3 Matshi 2021
Iifayile ze-SEC zilungisiwe kwisikhalazo ngokuchasene nokuqhekeka, njengoko kuqala ukuQala
Ukuhlaziywa: 24 Februwari 2021
I-United States yezoKhuseleko kunye neKhomishini yoTshintshiselwano (i-SEC) ifake izilungiso isikhalazo ku-Ripple, etyhola ukuba ngabom ulahlekise abatyali mali XRP.
Isikhalazo esihlengahlengisiweyo sifakwe kwiintsuku nje ezimbalwa phambi kokumanyelwa kwetyala eliphambi kwe-SEC kunye neRipple, eyaqala ngoFebruwari 22. Ngelixa yayityhola iRipple Labs kunye nabaphathi bayo abaphezulu ngokwaphula imithetho yezokhuseleko ngokuthengisa nge-X 1.3 yezigidigidi ze-XRP, umzimba olawulayo ngoku betyhola ukuba uGarlinghouse noLarsen basebenzise ixabiso lentengiso yeXRP ngabom ngokunyusa nangokwehlisa intengiso yabo yeXRP ukuze ihambelane neemeko zentengiso.
Isikhalazo esihlaziyiweyo se-SEC sathi “Ukusukela ubuncinci ngo-2013 ukuza kuthi ga ngoku, abatyholwa bathengise ngaphezulu kwe-14.6 yezigidigidi zeeyunithi zokhuseleko lweeasethi zedijithali ezibizwa ngokuba yi-'XRP, 'ngembuyekezo yemali okanye ezinye izinto ezixabisa ngaphezulu kwe- $ 1.38 yezigidigidi zeedola zaseMelika (' iUSD '), ukuxhasa imisebenzi kaRipple kwaye ityebise ULarsen kunye neGarlinghouse. ”
Nangona kunjalo, uMcebisi Jikelele kuRipple, uStuart Alderoty, uqaphele ukuba esi sikhalazo sitsha asizisanga mpikiswano kwaye inye kuphela into esemthethweni eza kusonjululwa; ingaba i-XRP ithathwa njengokhuseleko phantsi kwemithetho yotyalomali yase-US. Ngokwe-tweet yakutshanje ngalo mbandela, u-Alderoty wabhala: “Uninzi lwenu lubonile, i-SEC yafaka isikhalazo esihlonyelweyo. Ibango kuphela elisemthethweni lihlala: ngaba ulwabiwo oluthile lwe-XRP lwenza ikhontrakthi yotyalo-mali? Ukuphoxa i-SEC kwakufuneka ukuzama 'ukulungisa' isikhalazo sabo emva kokulinda iminyaka ukusizisa kwindawo yokuqala… ”
Amanqanaba aphambili eXRP aBonwayo-ngoFebruwari 24
Ukulandela intengiso yegazi yentengiso ye-crypto izolo, i-XRP ibonakala iphinda ifumana amandla ayo kwaye inyuke nge-3.6% ngexesha lokushicilela. Oko kwathethileyo, eyona cryptocurrency yesixhenxe ngobukhulu kufuneka ibuyele umva ngaphezulu kokunganyangeki kwe- $ 0.5400 yokuseka ulawulo oluhlaziyiweyo lwentengiso.
Oko kwathiwa, sinokubona ixabiso lentengo (lidibanise) ngaphantsi kwe-0.5400 yokumelana neeyure ezizayo. Kwicala elisezantsi, kuphela ukwehla okuzinzileyo ngezantsi kwenkxaso ye- $ 0.4524 enokulahla amandla okonyuka okwangoku.
Ukunyuswa kwemali yentengiso yeXRP: $ 22 billion
XRP ukubusa: 1.4%
tags Cryptocurrency, Ripples, sec
Uhlalutyo lwamaxabiso e-XRP / USD-ngoFebruwari 17
Ukuhlaziywa: 17 Februwari 2021
Eqhubekayo I-SEC vs. Ripple I-debacle ihlwayele imbewu yokungathembeki ezintliziyweni zabatyali mali abaninzi ngokuchasene nokubamba iXRP.
I-CTO yangaphambili ye-Ripple, kunye nomsunguli we-co-co, u-Jed McCaleb, ukhokela le ntlawulo kwaye ebekhuphela i-Ripple yakhe (XRP) ebambe inqanaba elizinzileyo.
UMcCaleb, ecaleni kukaChris Larsen kunye noBrad Garlinghouse, bayila kunye basebenzise iRipple Labs ngonyaka ka-2012. Emva kokushiya iRipple, uMcCaleb wavelisa indawo yokutshintshiselana yeBitcoin engasasebenziyo. I-Gox kunye ne-Stellar Development Foundation, ephethe i-cryptocurrency ye-Lumen (XLM).
Umprogram washiya i-XRP malunga neebhiliyoni ezili-9 zeethokheni ze-XRP, ezingaphezulu kweebhiliyoni ezi-6 esele zithengisiwe. Nangona umphathi wangaphambili we-Ripple ekhululekile ukwenza nantoni na ayithandayo ngokubamba kwakhe i-XRP, isivumelwano esingqongqo malunga nokuba angathengisa kangakanani i-XRP ngemini yabhalwa phantsi, ukukhusela amaxabiso e-XRP kwintengiso kwiziphumo zokulahla okubalulekileyo.
Idatha yamva nje ibonisa ukuba uMcCaleb ebekwi-XRP yokuthengisa ispree okwethutyana ngoku. Ukusukela ukuqala kukaFebruwari, uMcCaleb uthengise i-XRP eyi-95 yezigidi, exabisa malunga ne-56 yezigidi zeedola. Ngomhla weValentine, umsunguli we-XLM waseka i-XRP yezigidi ezingama-38 ezixabisa malunga ne-22 yezigidi zeedola. Umhlalutyi wentengiso u-Leonidas Hadjiloizou uqaphele ukuba intengiso ye-XRP kaMcCaleb ayinakulibaziseka nanini na.
Umhlalutyi watsho “IJed izakuthengisa i-38,345,406.53 XRP ngosuku ngale veki. Oku kufikelela kwi-268M XRP okanye i-166M yeedola kumaxabiso akhoyo kwiveki e-1. Kule nqanaba, i-2.896B XRP yakhe iya kuphela ngoMeyi. Kwisiqingatha senqanaba (i-19M ngemini), wayezakuphela phakathi kuJulayi. Nge-10M ngosuku ukuphela konyaka. ”
Amanqanaba aphambili eXRP aBonwayo-ngoFebruwari 17
IXRP okwangoku ikwi-bearish roll, kulandela uphuhliso lwamva nje Isaga se-SEC. I-cryptocurrency iye yalahlwa kakhulu kwi-0.6374 yeedola yokuchasana, eyakhokelela kulungiso lwendlela ejonge phezulu. Nangona kunjalo, i-XRP yaphule umgca wokuhamba kwaye ibonakala ngathi iya kwinkxaso ye- $ 0.4524.
Oko kwathethi, i-cryptocurrency yesithandathu ngobukhulu inokufumana inkxaso efanelekileyo kwisidima se-0.5000 senkxaso yezengqondo, enokukunceda ukuba inyuse isaphulelo kwindawo eyi-0.6000 yeedola. Ukusilela kweenkunzi zeenkomo ukukhusela umgca we-0.5000 yeedola kungathintela ukuhla kweRipple, kwiiyure ezizayo.
Okwangoku, amanqanaba ethu aphikisayo akwi- $ 0.6374, $ 0.6660, kunye ne- $ 0.7800. Ngelixa amanqanaba ethu enkxaso aphambili ayi- $ 0.5000, $ 0.4524, kunye ne- $ 0.3838.
Imali iyonke yentengiso: $ 1.48 zezigidi
Ukunyuswa kwemali yentengiso yeXRP: $ 45.4 billion
XRP ukubusa: 3.06%
tags iindaba, Ripples, XRP
I-SEC vs Ripple: UkuHlala ngoku akunakulindeleka ukuba iPretrial isondele
I-US Security Commission kunye neKhomishini yoTshintshiselwano (i-SEC) kunye ne-Ripple, inkampani ebambe indawo yesithandathu ngobukhulu kwi-cryptocurrency, bobabini baqinisekisa ukuba akusayi kubakho sivumelwano kwityala langoku elichasene neRipple ngaphambi komhla wolingo olusemthethweni, njengoko uninzi lwabathandi be-cryptocurrency belindele oko.
Ukuqinisekiswa kwaqinisekiswa ngeleta yomhla we-15 kuFebruwari 2021, yaza yathunyelwa kwiJaji uAnalisa Torres. Kwileta, bobabini i-SEC kunye neRipple baqaphele ukuba "Ungakholelwa ukuba kukho ithemba lokulungiswa ngeli xesha" okoko bagqibela ukuxoxa ngalo mbandela.
Amaqela aqaphele ukuba zonke iingxoxo zenziwa phantsi kolawulo lwangaphambili kunye nabaphathi abaliqela be-SEC abangasekhoyo kwikhomishini, becinga ngokutshintsha kwamandla okwenzeka kwi-SEC ngasekupheleni konyaka ophelileyo.
Okwangoku, ukungavisisani malunga nokufunyanwa kwetyala kuye kwavela, njengoko omabini la maqela ephikisana ngobungqina, amangqina kunye nolwazi oluza kuziswa enkundleni.
I-SEC iqaphele ukuba isebenza ngokuthatha isiqinisekiso ezintlanu ngaphaya kweshumi elivunyelweyo ngezityholo, yongeza ukuba inokucela inkundla ukuba inyanzele uRipple ukuba abonelele ngamaxwebhu kunye nobungqina bendawo efanelekileyo yokuxhasa ingxoxo yakhe.
Oko kwathethi, inkampani enxulumene ne-cryptocurrency yenqabile ukwamkela esi sicelo, iqaphela ukuba amaxwebhu akhuselwe lilungelo legqwetha-lomthengi, esongeza ukuba ibango le-SEC “Ayifanelekanga kwaye ayinasiseko somthetho.”
I-SEC vs. Ripple
Umcimbi we-SEC kunye ne-Ripple waqala phakathi kuDisemba ka-2020, emva kokuba iqumrhu elilawulayo lifake isimangalo ngokuchasene neRipple ngokwenza intengiso yezokhuseleko engagunyaziswanga ngokomthetho wezokhuseleko.
Ikhomishini ibanga ukuba u-CEO wale nkampani kunye noSihlalo, u-Brad Garlinghouse kunye noChris Larsen, bathengise ngaphezulu kwe- $ 1 yezigidigidi kwi-XRP engabhaliswanga kubatyali mali.
Inkomfa yokuqala yamatyala kulindeleke ukuba ibanjwe ngoFebruwari 22. Ileta iqinisekisile ukuba omabini amaqela avumile ukumisela u-Agasti 16, 2021, njengomhla wokugqibela wenqanaba lokufumanisa, elibandakanya ukudityaniswa kwabo bonke ubungqina kunye nengxoxo.
← Entsha izithuba 1 ... 5 6abaDala izithuba →